शाहरुखको आलीशान विमान देखेर नायिका छक्क – Khabar Silo
काठमाडौं । भारतीय फिल्मी क्षेत्रका केही स्टारहरु आफ्नो आलीशान घर तथा विमानको कारण चर्चामा रहने गरेका छन् । यस्तोमा केही स्टार यस्ता छन्, जसको विभिन्न समाचार बेलाबेलामा आइरहने गरेका छन् ।
यसरी चर्चा आउने एक स्टार शाहरुख खान पनि हुन् । उनले पनि पछिल्लो समय आफ्नो सवारीको कारण चर्चामा छन् । बलिउड अभिनेत्री स्वरा भास्करले उनको बारेमा खुलासा गरेकी छन्।
स्वरा भास्करले एक अन्तर्वार्तामा शाहरुख खानको विमान निकै राम्रो रहेको बताएकी थिइन् । उनले शाहरुख खानको विमानको बाथरुम पनि १बीएचके बराबर रहेको बताएकी छिन् । उनले शाहरुखलाई समाचार हेर्नु राम्रो शोख रहेको बताएकी हुन् ।
स्वरा भास्कर पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने गरेकी छिन् । आफ्नो पोस्टको कारण उनले धेरैपटक ट्रोलर्सको पनि सामना गरिसकेकी छिन् । उनको शीर कोरमा नामको फिल्म आउँदै छ ।
शाहरुख खानसँग आफ्नो नीजि विमान रहेको छ । सो विमानमा उनका सहयोगि कलाकार देखिने गरेका छन् । शाहरुख आफ्नो विमानको प्रयोग चलचित्रको सुटिङ र प्रमोशनको लागि गर्ने गरेका छन् ।
दर्जनौं फिल्ममा अभिनय गरेकी अभिनेत्री प्रियंका कार्की अहिले वेब सिरिजमा देखिन थालेकी छन्।अभिनेत्री कार्कीसँगको अन्तर्वार्ता आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ। त्यसको एउटा प्रसंग :अभिनेता आयुष्मानदेशराजसँग वैशाखमा इन्गेजमेन्ट गरेपछि असारमा विवाह गर्ने भन्नुभएको थियो? असार त गइसक्यो त? विवाहको मिति सरेको हो?हो। आयुष्मान र मैले आउटडोरको लोकेसनमा विवाह गर्ने योजना बनाएको थियौं। वर्षाको कारण विवाहको अर्काे […]